Mezọ ndị ọzọ maka ihe ọghọm IETT Metrobus - RayHaber
[17 / 10 / 2019] Ekwesiri itinye Samsun Sivas Railway ozugbo enwere ike	55 Samsun
[17 / 10 / 2019] Nnukwu Bulgaria maka Volkswagen Plant	35 Bulgaria
[17 / 10 / 2019] Ezigbo Ozizi Eserese gaa Çanakkale!	17 Canakkale
[17 / 10 / 2019] Oke World Sea na Cable Car 12 n'efu Ruo Afọ	06 Ankara
[17 / 10 / 2019] İmamoğlu: 'Kagbuo mmekpa ahụ Haydarpaşa na Sirkeci Train Stations ma nye Ọnọdụ IMM'	34 Istanbul
[17 / 10 / 2019] Anadolu DMU National train train Set Started Drive Drive in Uşak	64 Uşak
[16 / 10 / 2019] Ingbọ Ugbọala bu ibu iji rute Europe site na BTK ga-agafe Sivas	58 Sivas
[16 / 10 / 2019] A na-azụ ndị ọkwọ ụgbọ ala ebe a	41 Kocaeli
[16 / 10 / 2019] Minister Turhan: Anyị na-ewere usoro maka 'Transportgbọ njem Na-egbochi Ọrịa'	06 Ankara
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulMezọ ndị ọzọ maka ihe ọghọm IETT Metrobus
Mezọ ndị ọzọ maka ihe ọghọm IETT Metrobus
09 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 34 Istanbul, General, Ụzọ Awara Awara, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Metrobus, Turkey 0
Usoro ndị ọzọ megidere ihe mberede metrobus
N’agbanyeghi nnukwu mgbanwe na 2019 n’ihe ọghọm Metrobus, IETT mere nyocha ọhụụ n’ihe ọghọm abụọ na nso nso a. Onye isi oche nke Nnyocha ahụ ji aka ya mee nyocha ihe mberede ndị ahụ. A rịọrọ ọkachamara site na berlọ ndị ọrụ injinịa Mechanical.
Metrobus, nke na-eme njem 7 puku ugboro kwa ụbọchị yana puku kilomita 220 ma buru nde ndị njem 1, na-arụ ọrụ siri ike iji gbochie ihe ọghọm. Mgbe ihe ọghọm ndị dị na ahịrị Metrobus na Ọktọba, njikwa 6 na 8 IETT gbakọtara iji nyocha. Onye na-esote onye isi njikwa nke IETT Hamdi Alper Kolukısa duziri nzukọ ahụ, a tụlere ihe ndị kpatara ihe mberede na usoro ihe ndị metrobus. Ndị isi ngalaba, ndị isi niile dị mkpa nke IETT bịara nzukọ ahụ.
Onye osote onye isi njikwa Kolukısa kwuru na a malitere nyocha zuru ezu gbasara isi ihe mberede ndị ahụ na onye isi ndị ọrụ nyocha na-ekenye onwe ya na nyocha nke nhazi. Kolukısa, ụlọ ọrụ ndị na-ahụ maka injinia chọkwara onye ọkachamara, ka ọ gbakwụnyere.
N'oge nzukọ a, a na-ekwukwa banyere ndị ọkwọ ụgbọala na ndị ọkwọ ụgbọala nke ha jibu. N'ime etu a, e kpebiri itughari uche na nkuzi enyere ndị ọkwọ ụgbọala ahụ maka ịkwọ ụgbọala ahụike ka ọ dị mma na iburu ụzọ maka ihe ọghọm.
Ndi isi obodo ukwu nke Istanbul, ihe ọghọm metrobus mere mgbe e nwesoro usoro ndị a, ihe ọghọm ndị a iji gbochie “Usoro Earlydọ aka na ntị tupu ebido itinye ọrụ.
Site na usoro nke ekwuru, dị ka data IETT si kwuo, ọnụ ọgụgụ ihe ọghọm dị n’ahịrị na-adakwa. Onu ogugu nke ihe mberede site na otutu afo bu ndi a:
ọnụ ọgụgụ metrobus
Ihe ọhụrụ megide TCDD, ọnwụ ụmụ mmadụ na anụmanụ na-abanye okporo ígwè. 22 / 03 / 2012 A na-eme atụmatụ iji gbochie ọnwụ nke ndụ site n'oge ruo n'oge site na nkwekọrịta nchedo a na-agbanye mgbanaka ndị echekwara TCDD. TCDD 1. Dika ozi ndi natara site na Regional Directorate of Road Authority, enwere nchebe nke usoro nhazi nke ulo ndi ozo di iche iche ma o bu ebe ozo. TCDD, ndị ụgbọ okporo ígwè na ndị na-eme njem na-eme ihe n'ụkpụrụ nke International Railway Union, yana nchekwa nke gburugburu okporo ígwè na-elekọta. N'ụzọ dị otú a, ọ bụ iji gbochie ọnwụ nke mmadụ na anụmanụ na ọnwụ site n'oge ruo n'oge. Na Edirne, ogige nchedo, nke e nyere ihe ka mkpa maka ebe obibi ahụ, na-aga n'ihu. Ndị otu a na-arụ ọrụ na-amụba nchebe nke ebe ụgbọ okporo ígwè na mpaghara ndị a họpụtara
Ngwurugwu dị na nrịgo gafere belata ihe mberede 10 / 01 / 2012 N'ihi usoro ndị e mere na afọ 10 gara aga, ọdachi ndị na-agafe agafe na ọnụọgụgụ nke ndị nwụrụ anwụ na ndị merụrụ ahụ na ihe mberede ndị a adalatala. N'ime usoro, 78 pasent nke ọnụ ọgụgụ nke ihe mberede na-agafe n'ogologo, ọnụọgụgụ 15 nke ndị tụfuru ndụ na 50 pasent nke ndị merụrụ ahụ belatara. Dị ka TCDD si Hem Level Crossing Report kaz, ihe mberede na-aga ebe dị ala, ma n'ihi ya, ha so n'ime nsogbu kachasị mkpa nke TCDD. Dị ka ọnụ ọgụgụ si kwuo, mmadụ 600 na-anwụ kwa afọ na ihe mberede na crossing na Europe. Dị ka International Union of Railways (UIC) si kwuo, 95 bụ ọrụ maka ndị na-eme njem n'okporo ụzọ Yüzde
Ngwurugwu megide Ngwongwo 26 / 12 / 2012 Minista ahia na ahia ahia Hayati Yazici, kwadebere igbochi mmanu n'ime iwu iwu, karia mgbaputa ahu nke na-etinye aka n'igbu ahia nke ulo oru a nile ga-agbanye akara, "Iwu iwu nke edebere na itinye mmanu nke mmanu mmanu ga-agwụ. , a ga-eme ihe dị mkpa iji chedo gburugburu ebe obibi na ahụike mmadụ, "ka o kwuru. Minista ahia na ahia ahia Hayati Yazici, TOBB Social Facilities nwere mkparita uka ndi mmadu kwuru banyere ihe eji eme ka mmanu. Akwụkwọ Minista Minista Nke 2012 / 19 kwupụtara na emeela ndokwa dị mkpa n'ọgụ a na-ebuso mgbochi mmanụ ụgbọala ...
Usoro Metrobus na New Delhi emeela ọgaranya na ogbenye 11 / 07 / 2012 Ò ngwọta me ka Turkey na njem, ma ọ bụ na mmejuputa iwu-nke ibelata nke okporo ụzọ Lanes ruru njubiga ókè nke mmadụ, nakwa dị ka ndị na-agba ịnyịnya na Metrobus n'okpuru ụka na-adịghị nnọọ afọ ojuju, na-edu ndị klas ahụ na-alụ na India. Ụwa kasị nwee ụba ochichi onye kwuo uche, India isi obodo Metrobus yiri iga usoro maka ịchọta ihe ngwọta na-okporo ụzọ nsogbu na New Delhi, a ụgbọala nwe boro ala na n'etiti ego bi eji njem ọha na eze ndị ọgaranya. Ebe ọ bụ na ya ẹkụre na 2008 nke mere oké eneni "Bus Rapid Transit" (OHT) korido, ọ bụ ugbu a ogige na ngwa nke ụgbọala nwe. The mbụ pụrụ iche ikpe ...
Oge Prozụta Constructionzụ: Constructionrụ Ọrụ nke Plato Dị ala N'etiti Xzọ 1 na 2 na Niğde Station na Mpaghara Boron
Ọktoba 17 @ 14: 30 - 15: 30
Ọktoba 18 @ 10: 00 - 11: 00
Urszọ ursgbọ okporo ígwè Bursa Abụghị Ọsọ 'High Standard'
National Match Organisation maka ụgbọ elu Metro na Istanbul
Kahramanmaraş Book Fair Bus Schedules Kwuru
Eskişehir gara n'ihu na-esetịpụ ezi ihe nlereanya n'okporo ụzọ dị larịị
Ekwesiri itinye Samsun Sivas Railway ozugbo enwere ike
Ndokwa maka mgbanwo ezumike na Alanya
Nnukwu Bulgaria maka Volkswagen Plant
Alternzọ ativezọ Ọzọ tozọ Gafere Isi Obodo
Ọrụ okporo ụzọ na Muğla ruru 2450 Km
Ezigbo Ozizi Eserese gaa Çanakkale!
Oke World Sea na Cable Car 12 n'efu Ruo Afọ
RayHaber Ozi Ntanye 17.10.2019
Njikwa YOLDER bịara na Ankara
İmamoğlu: 'Kagbuo mmekpa ahụ Haydarpaşa na Sirkeci Train Stations ma nye Ọnọdụ IMM'
Ilgaz Mountain Ski Center na-akwado maka Oge Ọhụụ
ISAF ga - enwe mmasi na 2019 ..!
Seçer, Usoro Nchebe Ọkwa okporo ụzọ gara Mgbakọ mmeghe
Asphalt Paving na-arụ ọrụ na Bursa Yildirim
400 Ton Asphalt nyere Izmit Marina
Ọktoba 17 @ 10: 00 - 11: 00
Ngosipụta ọmịiko: Nrụpụta nke eriri Beylikova
Ọktoba 18 @ 14: 00 - 15: 00
Ihe ọhụrụ megide TCDD, ọnwụ ụmụ mmadụ na anụmanụ na-abanye okporo ígwè.
Ngwurugwu dị na nrịgo gafere belata ihe mberede
Ngwurugwu megide Ngwongwo
Usoro Metrobus na New Delhi emeela ọgaranya na ogbenye
BTS, TCDD adịghị arụ ọrụ megide ihe mberede
Sistemụ fficgba fficzọ Mgbapụta Ledoro Mere na Ihe mberede na Tarsus
Nhọrọ ọzọ na Metrobus sitere na IETT malitere usoro 3
Nkọwa Metrobus site na IETT
Mpempe akwụkwọ Metrobus na IETT
Taa na History: 16 October 1830 Nke mbụ ụgbọ okporo ígwè na Ottoman Alaeze Ukwu ...
Taa na History: 15 October 1939 Ilica-Bonito ụgbọ okporo ígwè Tarih
Taa na akụkọ ihe mere eme: 14 October 1941 Uzunköprü na Svilingrad ...
Taa na Akụkọ ihe mere eme: 13 October 2017 OMSAN
Akwụkwọ akụkọ Họrọ ọnwa October 2019 (311) September 2019 (555) August 2019 (508) July 2019 (633) June 2019 (504) Mee 2019 (526) April 2019 (418) March 2019 (521) February 2019 (483) January 2019 (502) Ogwe 2018 (620) November 2018 (504) October 2018 (435) September 2018 (517) August 2018 (486) July 2018 (506) June 2018 (581) Mee 2018 (467) April 2018 (545) March 2018 (554) February 2018 (500) January 2018 (557) Ogwe 2017 (509) November 2017 (427) October 2017 (538) September 2017 (455) August 2017 (505) July 2017 (479) June 2017 (477) Mee 2017 (493) April 2017 (434) March 2017 (540) February 2017 (477) January 2017 (538) Ogwe 2016 (487) November 2016 (631) October 2016 (657) September 2016 (542) August 2016 (608) July 2016 (485) June 2016 (661) Mee 2016 (664) April 2016 (700) March 2016 (804) February 2016 (855) January 2016 (751) Ogwe 2015 (799) November 2015 (640) October 2015 (624) September 2015 (428) August 2015 (493) July 2015 (505) June 2015 (535) Mee 2015 (577) April 2015 (622) March 2015 (1017) February 2015 (878) January 2015 (1077) Ogwe 2014 (963) November 2014 (826) October 2014 (771) September 2014 (598) August 2014 (808) July 2014 (911) June 2014 (735) Mee 2014 (957) April 2014 (972) March 2014 (864) February 2014 (720) January 2014 (733) Ogwe 2013 (664) November 2013 (656) October 2013 (548) September 2013 (570) August 2013 (533) July 2013 (661) June 2013 (577) Mee 2013 (734) April 2013 (1059) March 2013 (1102) February 2013 (811) January 2013 (906) Ogwe 2012 (911) November 2012 (1168) October 2012 (830) September 2012 (886) August 2012 (974) July 2012 (863) June 2012 (591) Mee 2012 (445) April 2012 (563) March 2012 (699) February 2012 (546) January 2012 (417) Ogwe 2011 (149) November 2011 (35) October 2011 (23) September 2011 (18) August 2011 (25) July 2011 (18) June 2011 (16) Mee 2011 (13) April 2011 (13) March 2011 (33) February 2011 (24) January 2011 (13) Ogwe 2010 (335) November 2010 (12) October 2010 (15) September 2010 (12) August 2010 (16) July 2010 (9) June 2010 (19) Mee 2010 (6) April 2010 (3) March 2010 (62) February 2010 (303) January 2010 (1838) Ogwe 2009 (4) November 2009 (1) October 2009 (3) September 2009 (3) August 2009 (2) June 2009 (3) Mee 2009 (2) April 2009 (3) March 2009 (9) February 2009 (4) January 2009 (3) November 2008 (1) October 2008 (1) September 2008 (2) August 2008 (1) July 2008 (2) June 2008 (2) Mee 2008 (2) April 2008 (1) March 2008 (3) February 2008 (5) January 2008 (2) Ogwe 2007 (2) October 2007 (2) July 2007 (1) Mee 2007 (1) April 2007 (1) February 2007 (2) January 2007 (1) Ogwe 2006 (1) October 2006 (3) August 2006 (1) June 2006 (2) Mee 2006 (2) April 2006 (2) March 2006 (2) November 2005 (2) August 2005 (1) June 2005 (1) March 2005 (2) February 2005 (1) January 2005 (1) Ogwe 2004 (1) October 2004 (3) July 2004 (1) Mee 2004 (2) Ogwe 2003 (1) October 2003 (1) Mee 2003 (1) March 2003 (1) February 2003 (1) January 2003 (1) Ogwe 2002 (1) October 2002 (4) August 2002 (1) April 2002 (1) March 2002 (2) January 2002 (2) July 2001 (1) June 2001 (1) March 2001 (1) Mee 2000 (3) March 1999 (1) October 1998 (2) March 1998 (1) August 1997 (1) October 1996 (1) August 1996 (2) Mee 1995 (1) August 1992 (1) Mee 1990 (1)
Ịnụ ọkụ n'obi na-ebi ndụ na Turkey na Bursa Classic Car Championship
Onye ọhụụ kachasị ọhụrụ na Porsche's Sports Ful Car Car zuru oke: Taycan 4 S
Ọpụpụ Ọpụpụ na-aga Adapazarı
Volkswagen Factory Postpones Mkpebi na Turkey
Ndị na-ahụ maka ngwa ọgụ Dieci Telescopic na-enweta Nri zuru ezu na Emume Ndị Ahịa na Konya
Bọọlụ EGO Adabara Ọnọdụ Oyi
IETT na-emegharị oche ya iji bulie mmata
Oge ana-akpo IETT Women Driver Application rue oge October 15
Odide Ndị Isi Bridge Çavuşlu
A ga-arụ Ọrụ Runple Triple nke mbụ na mbụ na mpụga USA na ọdụ ụgbọ elu Istanbul! "
Ebufere Gebze Darıca Subway na Ministry, mana…